Isifundo seNastran Course-iGeofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Isifundo seNastran
I-Autodesk Inventor Nastran yinkqubo enamandla kunye neyomeleleyo yokulinganisa amanani kwiingxaki zobunjineli. I-Nastran yinjineli yesisombululo sendlela ephelileyo, eqatshelwa ngoomatshini bezakhiwo. Kwaye akukho sidingo sokukhankanya amandla amakhulu asizisela i-Inventor kuyilo loomatshini.
Ngexesha lale khosi uyakufunda ukuhamba komsebenzi okuqhelekileyo kuyilo kunye nokulingisa kwamalungu oomatshini. Siza kuhlala sinika intshayelelo elula kunye nengcinezelo kwimiba yethiyori yokulinganisa. Ngale ndlela unokukhulisa iikhrayitheriya kwaye uqonde izizathu zeeparameter oza kuzifumana kwinkqubo.
Siza kusuka kwezona zilula ziye kwezona zinzima, siqala ngohlalutyo lomgama kunye namacandelo oomatshini. Emva kokoyisa iziseko, siya kungena kwihlabathi lohlalutyo olungagqibelelanga, apho uninzi lweengxaki ezibonakalayo kufuneka zisonjululwe. Emva koko, siza kuqhubela phambili kuhlalutyo olunamandla, apho siza kuxoxa ngeendlela ezahlukeneyo zophando ezisetyenziswayo, kubandakanya nohlalutyo lokukhathala. Kwaye okokugqibela, siza kujonga kwizifundo zokudlulisa ubushushu ngokudibeneyo.
Ikhosi epheleleyo ngokupheleleyo eya kuthi ibeke iziseko kwaye isivumele ukuba sakhe phezu kwayo.
Yenza ukulinganisa ukusebenza kwenxalenye yomatshini
Qonda iikhonsepthi ezinxulumene nokulinganisa kwamanani usebenzisa izinto ezigqityiweyo.
Qonda ukuhamba komsebenzi kwi-Autodesk Inventor Nastran
Yenza ukulinganisa okungapheliyo kweengxaki zoomatshini
Yenza uhlalutyo lokuziphatha olungagungqiyo koomatshini.
Ukuqonda iintlobo ezahlukeneyo zokungahambelani.
Yenza uhlalutyo olunamandla kunye nongcangco kwiindawo zoomatshini
Ukuqhuba izifundo zokudinwa
Yenza izifundo zokudlulisa ubushushu kwiindawo zoomatshini.
Ngaphambili ubuchule bommandla we-Autodesk Inventor
Iingcali ezinxulumene nokudalwa kwamalungu kunye neeprototypes
Icandelo labayili boomatshini
Abasebenzisi be-Autodesk Inventor abafuna ukwandisa i-domain yabo ngokulinganisa ngaphakathi kwesoftware